ICathay Pacific irhoxisa iinqwelomoya emva kokuba abasebenzi betyeshele imithetho emitsha yokuvalelwa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » ICathay Pacific irhoxisa iinqwelomoya emva kokuba abasebenzi betyeshele imithetho emitsha yokuvalelwa
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Iindaba ezizii-Hong Kong • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
ICathay Pacific yanyanzelwa ukuba irhoxise ezinye zeenqwelomoya zabakhweli eziya eHong Kong emva kokuba uninzi lwabasebenzi bayo benqabile ukulandela imithetho yokuvalelwa komntu ophetheyo.
As Hong Kong ilandela iqhinga le-'COVID-zero 'kutyhala lokuphinda ivule umda wayo nelizwe lase China, enye yezona nqwelomoya zikhulu zaseAsia kunye nomthwali wasekhaya waseHong Kong, iCathay Pacific ibinomdla wokunceda abasemagunyeni besixeko ngolu hambo.
Cathay Pacific icele abasebenzi bayo bekhabhinethi kunye nabaqhubi beenqwelomoya ukuba bavolontiye kwinkqubo 'evaliweyo' ngoDisemba. Oku kwakubandakanya ukusebenza iiveki ezintathu zilandelelana, ndihlala ngaphakathi Hong Kong ngokufutshane nje, phambi kokuvalelwa iiveki ezimbini ekubuyeni kwabo.
Nangona kunjalo, inkampani ibonakala inamavolontiya ambalwa kakhulu ukuba asebenzise le shedyuli njengoko uninzi lufuna ukuba sekhaya ngeKrisimesi.
Cathay Pacific kwanyanzeleka ukuba irhoxise ezinye iinqwelomoya zabakhweli bayo ukuya Hong Kong emva kokuba uninzi lwabasebenzi bayo benqabile ukulandela imithetho yokuvalelwa komntu ophetheyo.
Ngenxa yokungakhathali kwabasebenzi, Cathay Pacific kwanyanzeleka ukuba kuguqulelwe malunga nesinye kwisithathu seenqwelomoya zayo kwimpahla endaweni yokuthutha abantu.
“Izithintelo zokusebenza kunye nokuhamba okushiyekileyo ziyaqhubeka nokunyanzela amandla ethu okuqhuba iinqwelomoya njengoko bekucwangcisiwe. Sihlanganisa ishedyuli yethu yenqwelomoya yabakhweli ngoDisemba 2021, kuquka nokurhoxisa inani leenqwelomoya ukuya Hong Kong,” utshilo isithethi saseCathay Pacific.
Inkampani yeenqwelomoya iya kwenza amalungiselelo okubhukisha okungenye kwiinqwelomoya zabakhweli ezishiyekileyo ukuze zivumele abaxumi abamoya wabo urhoxisiweyo.
Ngaphandle kwemithetho engqongqo yokuvalelwa kwabantu eHong Kong, iimeko ze-COVID-19 zihlala zivela, kunye nabaqhubi beenqwelomoya abathathu baseCathay Pacific mva nje bevavanya ukuba banayo emva kokufika bevela eFrankfurt.
Iimeko ezimbini zokwahluka okutsha kwe-COVID-19 esemazantsi e-Afrika, esele ibangele amazwe amaninzi e-EU ukuba abuyisele izithintelo zokuhamba, afunyenwe kubahambi abavalelwe bodwa, iSebe lezeMpilo laseHong Kong libhengeze ngoLwesihlanu.